Ungazitshintsha njani iifoto zakho zibe ziifoto zePolaroid | Iindaba zeGajethi
Kule mihla sihlala siphethe ikhamera esemgangathweni esemgangathweni kwifowuni yethu ephathekayo, ekwaziyo ukuthatha iifoto ngeepikseli ezizigidi, kwaye kananjalo, ngoncedo olukhulu lokuba sikwazi ukugcinwa ngokwamanani kwimemori yesixhobo sethu ngendlela efanelekileyo kwaye ekhawulezileyo kwaye ikhuselekile , ukuze sikwazi ukucubungula, ukuprinta okanye ukwenza nabo oko kulungele thina. Kodwa kwiminyaka engamashumi amabini eyadlulayo, eli bali lahluke kakhulu. Ukugcinwa kwi-reel yesikhundla esilinganiselweyo, kwaye kufuneka ubaphuhlise, ukuthatha imifanekiso ngokungathandabuzekiyo kwakuyinkqubo enzima kwaye inzima.
Kodwa ngexesha le Ikhamera yePolaroid yangoko nangoko, Izinto zaba lula kakhulu, kuba ngexesha lokuthatha ifoto yayi Bendiprinta kwikhamera enye, ukufumana umfanekiso kwimizuzwana nje kwaye nangaphezulu komgangatho owamkelekileyo. Kwaye namhlanje, ngenxa yokuncipha okukhulu kwezonxibelelwano, ngakumbi i-Instagram, kunye nentsingiselo yokuvuna kule ndawo, ibuyela yazisa iikhamera kwangoko kwaye, ngaphezulu kwayo yonke loo nto, iifoto zephepha eziqhelekileyo ezinesakhelo esimhlophe, esikhumbuza ngokungathandabuzekiyo iiPolaroids. Kodwa ubuyazi lonto ungaguqula nayiphi na ifoto ukuze ijongeke ngathi ithathwe ngePolaroid? Funda kwaye ufumane indlela.
Imiphetho emhlophe ibangele uvakalelo. Kwaye namhlanje bayaqhubeka nokwenza njalo. Ukuba ufuna ifoto yakho ibe yeyona kuhle kwaye kakhulu Retro kwinethiwekhi yakho yoluntu, kuya kufuneka ijongeke ngokutsha isetyenziswe ngePolaroid. Kodwa nangona isandla sesibini sinokufumana ezinye zikwimeko entle kwaye ngexabiso elifanelekileyo, ayinguye wonke umntu onokukwazi ukufumana ikhamera ekhawulezileyo yolu hlobo. Makhe sichaze indlela yokwenza iifoto zakho zemihla ngemihla zibonakale ngathi zisanda kuprintwa zezona zibalaseleyo zePolaroids,
1 Isakhelo somfanekiso wePolaroid
3 Isixhobo esikhawulezayo
Isakhelo somfanekiso wePolaroid
Ngokusebenza okungaphezulu kokulula, Isakhelo somfanekiso wePolaroid izakusivumela sebenzisa isiphumo sePolaroid, kunye nomda omhlophe kunye nendawo eqhelekileyo esezantsi yeefoto, kodwa ukwazi ukuyinika itwist. Iphepha lewebhu apho kufuneka sikwenzile layisha umfanekiso esifuna ukuwuguqula, Kwaye siya kuyibona ngokuzenzekelayo idityaniswe kwisakhelo esilingisa iphepha lePolaroid lokufota.
Njengoko ubona kumfanekiso ongentla, nje ukuba ifoto ilayishwe sinakho yongeza i-caption (utolo olubomvu), lungelelanisa izinto ezinje nge ukukhanya, ukugcwala, umbala, okanye umahlukongokunjalo phinda wenze ubungakanani kwakhona, yongeza isicatshulwa okanye ujikeleze ifoto (utolo oluluhlaza), kunye gcina ifoto kwikhompyuter yethu okanye kwiselfowuni. Ngale ndlela sinokuhlengahlengisa iiparameter ukuze sifumane isiphumo ngokupheleleyo kwintetho nganye.
Mhlawumbi igama linokukhohlisa, ke masikucacise kwasekuqaleni ukuba ayisosicelo sezixhobo ze-Android. IPoladroid yinkqubo esinako ukuyenza khuphela kwiwebhusayithi yayo esemthethweni kakhulu yeeWindows kunye neMac OS. Ukusebenza kwayo kulula kakhulu, kwaye kufuneka siyifake kube kanye kuphela. Uncedo lwayo olukhulu kukuba ayifuni uxhumano lwe-intanethi ukusebenza xa sele ifakiwe.
Xa sivula inkqubo, iwindow encinci edadayo iya kubonakala ikwimo yekhamera yePolaroid. Kufuneka nje tsala umfanekiso ukuba sifuna ukuguqulela kwikhamera, kwaye inkqubo iya kuqala ngokuzenzekelayo. Kuyacotha kancinci, kodwa konke kungenxa yesiphumo esisebenzayo esisebenzayo, ukuthatha imizuzwana embalwa ukubonisa umfanekiso ophuhlisiweyo ukuya kwi-100%. Xa oku kusenzeka, iribhoni ebomvu iya kuvela kuyo ukubonisa ukuba inkqubo igqibile, kwaye singayifumana kwifolda yokukhuphela. Uncedo olukhulu lwale nkqubo kukuba singayenza inkqubo kwi Iibhetshi zeefoto ezilishumi ngexesha.
Enye into elula kakhulu ukusebenzisa iwebhusayithi ayifuni ukufaka nayiphi na inkqubo ngu-Instantizer. Njengakwimeko yokuqala, kufuneka nje fikelela kwiwebhu, Khetha ifoto ukuba sifuna ukuguqula (utolo oluhlaza okwesibhakabhaka) kwaye ukhethe ukuba siyafuna yongeza inkcazo o Jikelezisa ifoto inani leedigri ngokukodwa. Xa sikhethe ukhetho olunomdla kuthi, kufuneka nje layisha ifoto usebenzisa iqhosha elithi «Layisha umfanekiso» (utolo oluluhlaza), kunye ngokuzenzekelayo siya kufumana umfanekiso oguqulwe kwifomathi yePolaroid.
Lo mfanekiso singayikhuphela Kwikhompyuter yethu okanye isixhobo esiphathwayo, nkqu iwebhusayithi ngokwayo ibonelela nge ikhonkco ngqo kuyo isebenza iiyure ezingama-24, ukwabelana nabahlobo okanye usapho. Umahluko kwiwebhusayithi yokuqala ilele kwi iindlela ezimbalwa ukufaka isicelo kumfanekiso wethu, kunqabile kuninzi, ngenxa yokuba sinokuguqula kuphela i-engile yesithombe kunye nokongeza inkcazo, kodwa kunjalo umgangatho uchanekile kakhulu, nangona oku sele kunencasa yomntu wonke.
Njengoko ubonile, Kulula kakhulu ukufaka isiphumo sePolaroid kumfanekiso ngaphandle kokuba unayo okanye ukuthatha ifoto ngekhamera yangoko nangoko. Nokuba yeyiphi thumela kumajelo asekuhlaleni, yabelana nabahlobo okanye usapho, okanye ngokulula yigcine kwilayibrari yakho yemifanekiso, akukaze kubuhlungu ukwazi ukuba ungaziguqula njani iifoto zakho zibe fumana iziphumo ezingaphezulu, Yenza imifanekiso yakutshanje ibonakale indala.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Ungazitshintsha njani iifoto zakho zibe ziifoto zePolaroid